I-Clostebol i-acetate powder (855-19-6) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / Anabolics Steroids / Series Testosterone powder Series / Clostebol Acetate (Turinabol) powder
SKU: 855-19-6. iindidi: Series Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-cloam ye-Clostebol Acetate (i-Turinabol) powder (855-19-6), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Clostebol Acetate (iTurababol) ividiyo ye powder
I-Clostebol Acetate (Turinabol) powder Abalinganiswa
igama: I-Clostebol Acetate (iTurababol) ipowder
I-molecular Formula: C21H29ClO3
Isisindo somzimba: 364.91
I-Clostebol Acetate (Turinabol) powder ukusetyenziswa kumjikelezo we-steroids
Amagama amaRaw Turinabol powder
I-Clostebol Acetate (i-Turinabol) powder (i-CAS 855-19-6), enegama le-4-chlorotestosterone, kunye namagama e-brand Tbol, Macrobin, iSteranabol, i-Alfa-Trofodermin, i-Megagrisevit.
I-Turinabol (i-Chlorodehydromethyltestosterone, eyaziwa nangokuthi 'i-Tbol' kunye ne-Oral Turinabol) ngokwenene ifomu eguquguqukileyo ye-Dianabol (iMetandrostenolone), apho ngokwenene idibaniselwano yamakhemikhali e-Dianabol kunye neClostebol (4-chlorotestosterone). Ngenxa yoko le nto ke igama eliyinyani likamachiza yi-4-chlorodehydromethyltestosterone. Ukuguqulwa kwendlela yamakhemikhali eyenza ukuba kube yinto engeyona iyancitshiswa kwaye ibe nexabiso eliphantsi kakhulu le-androgenic, mhlawumbi isizathu sokuba iTurinabol ibizwe ngegama elithi "Dianabol".
Raw Clostebol I-Acetate powder Usetyenziso
I-Turinabol inexabiso elincinane le-androgenic ye-6 kunye ne-anabolic amandla okulinganisa kwe-53, oku kwenza kusondele ukugqibelela ngokumalinganisa nemiphumo emibi kunye neenzuzo. Ngenxa yokulinganiswa kwe-androgenic ephantsi, i-acne, ubugwenxa, ukunyuka komsindo kunye nokwanda kwamandla ayinqabile, kodwa ayikho. Ukuthelekiswa nehomoni yomzali wayo u-Dianabol, i-anabolic ebuthakathaka kunye nabasebenzi bomzimba abayiboni i-Oral Tbol njenge-agent gaining agent.
I-Turinabol inomlinganiselo wesiqingatha se-anabolic ye-Testosterone, ngoko i-40-60mg ngosuku lukwaziswa njengengeniso. I-turinabol iidayitha ingadlulela i-80-100mg ngosuku, kodwa i-bodybuilders zibika ngemiphumo emibi iqala ukunyuka, ngelixa izuzwana zihlala zihlala zihlala zihlala.
Ngenxa yokwahluka kwayo okuhlukileyo kweempembelelo zayo kunye ne-androgenic kwi-anabolic, kuyinto ebuthakathaka i-anabolic steroid kune-hommonic hormone yayo i-Dianabol. Nangona kunjalo, isiqinisekiso kunye neTbol kukuba nangona naluphi na uhlobo olubonakalayo lwezakhiwo zomzimba, luya kubonisa okungephaya kwindlela ye-androgenic nemiphumo kwaye akukho miphumo ye-estrogenic (ngenxa yokungakwazi ukuphazamiseka kwi-Estrogen). Ngenxa yomelelo elomeleleyo kuneDi Dianabol, amanyathelo afunekayo ukuba enze iziphumo ezivela kwiTbol zibhekwa njengeziphakamileyo kakhulu (oku kuya kuchazwa kungekudala kwi candelo le-Tbol doses of this profile).
Ngokubanzi, abagijimi nabazimba bomzimba banokulindela ukuzuza okuzinzileyo kunye nekhwalithi enomgangatho ongenamngcipheko kwanoma yiyiphi i-bloating, gyno, okanye nayiphina imiphumo ye-estrogenic. Ubukhulu beMisa kunye nobutyebi abaziwa ngokuba bubangelwa ngenxa yokungabikho kwamandla a-anabolic, kodwa ukuzuza okusemgangathweni kunye nokwemgangathweni okuqhubekayo okukhula rhoqo ngokugqithisileyo kunokuba kulindeleke. Isetyenziselwa njengento efanelekileyo yokusika ngexesha lokulahlekelwa kwintlawulo okanye ukulungiswa kwangaphambili komncintiswano ngenxa yokungakwazi ukuguqula kwi-Estrogen. Amandla eTurinabol akhanyisa njengento ehambelana nezinye i-anabolic steroids xa iqhutywe (ixutywe) kunye nezinye i-anabolic steroids ngenxa yokukwazi ukubopha kwi-SHBG. Ukubophezela kwi-SHBG kuvumela ukuba ezinye ze-anabolic steroids zixutywe ukuba zifumaneke ukuba zenze umsebenzi wazo, zingenakuvinjelwa yi-SHBG, enye enye inzuzo ekubonayo.
Isexwayiso kwi-Raw Turinabol powder
Isicelo sexesha elide sinokubangela i-sodium, ukugcinwa kwamanzi, ngoko ukugcinwa kwe-sodium kubangelwa ukuvuvukala kwesigulane. Isifo sesibindi, ingozi yomshukela, i-edema, izigulane zomhlaza wesifo seprotate kunye nabasetyhini abakhulelweyo baphephe ukusebenzisa. Ukusetyenziswa kwexesha elide kunokubangela ubuncinane besifazane.
Raw Clostebol I-acétate powder Imiyalelo eyongezelelweyo
I-Clostebol yi-AAS ebuthakathaka kunye nokusetyenziswa njengento yokuphucula imveliso. Okwangoku ivalwe yi-World Anti-Doping Agency. I-Oral Turinabol, ukudibanisa izakhiwo zamakhemikhali ze-clostebol kunye ne-metandienone, yayisetyenziswa ngokubanzi kwinkqubo ye-doping yase-East Germany.
I-Tbol ivame ukuxutywa kunye nezinye i-anabolic steroids, oku kubangelwe ukuba yinto elula kunye nezantsi ye testosterone amanqanaba kubasebenzisi. I-Turinabol ayiyona enye ye-anabolic okanye i-androgenic ye-steroids, ngoko ke ukufumana amaninzi amaninzi kufakwa ngaphezu kweTbol. Le anabolic enobubele isetyenziswe ngexesha lokunquma, amaxesha okulahleka kwamathambo kunye nokuphambi kokunciphisa umzimba.
Imijikelezo yeTurinabol ingaba nokusebenzisa umlomo wedwa phakathi kwe-40-60mg ngosuku ngeeveki ze-6-8. Oku kuya kunika amandla enamandla, ukuxhamla umzimba kwaye uvumele umsebenzisi we-steroid ukuba alondoloze ubunzima be-muscle xa kukho ukungena kwekhalori. Ukuthintela ukuphulwa kwamaprotheni yisiphatho esidinga kakhulu xa kufika kwi-10% yeoli yomzimba yinjongo.
Izitaki eziphambili ze-Oral Turinabol zingathetha ezinye iicube ezinje; I-Testosterone ingasetyenziselwa ukufumana iziphumo zentsebenzo. Amalungiselelo aseTesttosterone afutshane kwaye amade angasetyenziswa. I-Testosterone Propionate kwi-100mg injected njalo imihla ngemihla ngeTurinabol 60mg ngosuku oluhlala ixesha elide iiveki ze-8 yindawo ephambili yokuxhamla umzimba kunye nokutya kwehlobo.
Ngexesha elide ixesha leTesttosterone, umzekelo, ukusebenzisa i-Testosterone Enanthate kwiiveki ze-12, umlomo uqaliswa kwiiveki zokuqala ze-4-6 ngelixa iTesttosterone "ikhaba". Eli yigama elisetyenziselwa xa amazinga eplasma yegazi azinzileyo ephakamileyo kunye nokuzuza kwi-mass muscle kunye neprotheni synthesis ziphezulu zazo.
I-Turinabol inokuvelisa izidumbu ezinamandla kunye nezihlala ixesha elide. Ngako oko umgijimi owusebenzisayo akafanele alindele ukufumana amandla ngokukhawuleza, ubunzima kunye nesisindo. Yona "ixesha elide" le-anabolic steroid.
Ndiyabulela kwisilinganiso sayo esezantsi, ngokukhawuleza kufaniswe ngumzimba, oza kutshabalalisa i-metabolites ngokusebenzisa umchamo. Iimvavanyo zokulwa neengxaki zokulwa nexesha eliqhelekileyo azivumi ukufumana iTurinabol ukuba umdlali uyeke unyango kwiintsuku ze-5 ngaphambi kokhuphiswano.
I-Turinabol ayikhokelela ekugcinweni kwamanzi ngenxa yokulinganisela kwamanzi kunye neemaminerali. I-androgenic encinane kunezinye i-anabolics ezinjenge-Dianabol. Le mpawu ibuye ibenze abesifazana bayisebenzise kalula, nangona kufuneka baqaphele ukuba bangadluli ubude bonyango obunqunyiwe.
Ekugqibeleni, ukutshintshwa kwe-chlorine kuvimbela ukusebenzisana ne-aromatase. Ngaloo ndlela akukho mngcipheko omncinci we-gynecomastia okanye uguqulelo lwe-DHT.
Ekugqibeleni, i-Turinabol yinto ephezulu kakhulu yokulungiselela umzimba wakho "ngokwemvelo". Ukukwazi kwakhe ukwakha imisipha epheleleyo kuthetha ukuba abagijimi abaninzi bayayisebenzisa ngexesha lokuphumla (ixesha eliphumayo). Oku kuvumela ukuba bahlale bekulungele kwaye bomeleze imisipha ngaphandle kokufumana ubuninzi.
I-Clostebol i-Acetate powder (i-CAS 855-19-6)
I-Half Life: iiyure ze-16
Ixesha lokuva: I11 - 12 inyanga
I-Anabolic Rating: 54
I-Androgenic Rating: 6
Raw Clostebol I-Acetate powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Clostebol i-Acetate powder (CAS 855-19-6): Thenga iTurinabol powder ukusuka kwi-AASraw
I-AASraw inikeza ubungqina 99% Clostebol I-Acetate i-acetate ipowder eluhlaza kumalungu omzimba okanye iilabhu zangaphantsi.
I-Clostebol Acetate (iTurababol) Iipowi zokupheka:
Iimpembelelo zeClostebol i-Acetate powder: Kutheni abantu bathanda i-Tbol?